CNC токтокစက်စက် - တရုတ် CNC токစက်စက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
6000rpm ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း Slant Bed CNC Lathe Machine, 330mm Workpiece CNC Metal Lathe
အမည်: Cnc ခုံသုံးမော်ဒယ်လ် - HTC4235 စားပွဲကျော်အမြင့်လွှဲအချင်း - ၄၂၀ မီလီမီတာအမြင့်အရှည် - ၃၃၀ မီလီမီတာ Z အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၃၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံအလှည့်အမြန်နှုန်း - ၆၀၀၀rpm အမြန်နှုန်းအိပ်ကုတင် ၄၂၀ မီလီမီတာ slant Type Cnc токарစက်စက်တွင်းအပေါက်ဖောက်သည်။ Y ၀ င်ရိုးသည်ထွင်းထုသည့် function ရှိသည်။ ဤပုံစံသည်လှည့်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ကြိတ်ခြင်းနှင့်တူးခြင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ 3. စက်အတွက်ကြီးမားသောနေရာ, Z / X ဝင်ရိုးသည်ခရီးရှည်လျားသည်။ 4. Y ကိုဝင်ရိုးနှင့် X ဝင်ရိုး2အသက်ရှင်သော tooleach ရှိသည်ဖြစ်။ , X ဝင်ရိုးသည် 3-install လုပ်နိုင်သည်။
အကြီးစားဟိုက်ဒရောလစ် CNC ခုံနှင့်ကြိတ်စက် 2200 * 1600 * 1700mm
အမည်: Cnc ခုတ်စက်ပုံစံ: HTC4640 စားပွဲကျော်အမြင့်လွှဲအချင်း: ၃၆၀ မီလီမီတာအမြင့်အရှည် - ၃၅၀ မီလီမီတာ Z အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၄၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံအလှည့်အမြန်နှုန်း - ၄၂၀၀rpm အမြန်နှုန်းအမြင့် ၇၆၀mm ကုတင် ၇၆၀ မီလီမီတာ slant အမျိုးအစား Cnc токарစက်စက်တွင်းတွင်းမှဖောက်သည် Through ♦ 30 ° Slant bed သည် toolpost ကိုအော်ပရေတာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသောချစ်ပ်စီးဆင်းမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ♦ Ergonomically ပုံစံပြုချိန်ညှိနိုင်သော Controller panel ♦ Ballscrew သည်ပိုမိုတိကျမှန်ကန်စေရန်နှင့်လမ်းညွှန်၏အလယ်တွင်တည်ရှိသည်။
3500RPM Slant Bed CNC ခုံစက်၊ ၃၅၀ မီလီမီတာအပိုပစ္စည်း CNC လှည့်စက်
အမည်: Cnc ခုံသုံးမော်ဒယ်လ် - HTC3640 စားပွဲကျော်အမြင့်လွှဲအချင်း - ၃၆၀ မီလီမီတာအမြင့်အရှည် - ၃၅၀ မီလီမီတာ Z အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၄၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံလှည့်ခြင်းမြန်နှုန်း - ၃၅၀၀rpm - ၃၅၀၀RPM အမြင့်အရှည်လုပ်ငန်း - ၃၅၅ မီလီမီတာ slant အမျိုးအစား CNC ခုံစက်လည်ပတ် - တွင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသား ၁ သင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်အ ၀ တ်နှင့်အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ၃။ Electric Turret နှင့် Gang-Tools Turret နှစ်ခုစလုံးကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၄ ။
slant 30 ° / 45 °ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ 63mm Tool Turret Center က CNC ဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက်
အမည်: Cnc ခုံသုံးမော်ဒယ်ပုံစံ - HTC3627 စားပွဲကျော်အမြင့်လွှဲအချင်း: ၃၆၀ မီလီမီတာအမြင့်အရှည် - 200mm Z အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၂၇၀ မီလီမီတာအလေးတင်အလေး - ၁၈၅၀kgs ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၆၀၀၀rpm ဗိုင်းလိပ်တံ: ၅.၅ ကီလိုဂရမ် ၆၀၀၀rpm Slant အမျိုးအစား CNC ခုံစက်လည်ပတ်ခြင်း ၅၆ မီလီမီတာကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင် ၁။ အောက်ခြေ ၃၀ ဒီဂရီ / ၄၅ ဒီဂရီတည်ဆောက်ပုံ၏အိပ်ယာ၊ မြင့်မားသောတိကျမှုသေချာစေရန်စုပ်ယူမှုနှင့်အလွန်တောင့်တင်းမှု ၂ ။ အိပ်ယာ၊ အိပ်ရာကုန်းနှီး၊ ဝက်အူ၊
360mm Swing Slant Bed CNC ခုံစက်၊ ၂၀ မီတာ / Min လှုပ်ရှားမှုကွန်ပျူတာခုံစက်
အမည်: Cnc ခုတ်စက်ပုံစံ - HTC3627B စားပွဲကျော်အမြင့်လွှဲအချင်း - ၃၆၀ မီလီမီတာအမြင့်အရှည် - အပေါက်ဖောက်ခြင်းမှဖြတ်ကူးတံစို့ - ၂၀၀ မီလီမီတာအပေါက်မှအချင်း - ၅၆ မီလီမီတာဇအမ်အမ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၂၇၇ မီလီမီတာအိပ်ရာအမျိုးအစား - တစ်လုံးလုံးအလွှာ ၄၅ ဒီဂရီအသားတင်အလေးချိန် - ၁၈၅၀kgs မက်စ်အချင်း ၃၀mm Slant Type Cnc Lathe Machine Spindle Hole 56mm Product Feature ၁။ X / Z ၀ င်ရိုး linear line, အမြန်နှုန်းသည် ၂၀ မီတာ / မိနစ်ဖြစ်သည်။ ၂ ထိုင်ဝမ်မြန်နှုန်းမြင့်ဗိုင်းလိပ်တံ၊ တိကျမှုနှင့်အမြန်နှုန်းကိုသေချာစေခြင်း။ ၃ ။ Coulping, bearing, ball screw နှင့် linea ။ ..
၄၅ ဒီဂရီကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်ဖြင့်အလိုအလျောက်ချောဆီလျှံမှုစနစ် Slant Type Cnc Lathe Machine
နာမည်: Cnc ခုံသုံးမော်ဒယ်လ် - HTC3627 စားပွဲကျော်အမြင့်လွှဲအချင်း - ၃၆၀ မီလီမီတာအမြင့်အရှည် - အပေါက်ဖောက်ခြင်းမှဖြတ်ကူးတံစို့ - အမ်မီတာ - ၄၆ မီလီမီတာ Z အမ်ဇီးများကန့်သတ်နေရာ - ၂၇၀ မီလီမီတာအိပ်ရာအမျိုးအစား - တစ်လုံးလုံးအလွှာ ၄၅ ဒီဂရီအသားတင်အလေးချိန် - ၁၇၅၀ ကီလိုဂရမ်မက်စ်အချင်း ၃၀mm Slant Type Cnc Lathe Machine Spindle Hole 46mm Product Feature ၁။ X / Z ၀ င်ရိုး linear line, လျင်မြန်သောအစာသည် ၂၀ မီတာ / မိနစ်ဖြစ်သည်။ ..
မြန်နှုန်းမြင့်တိကျသောခုံအစက်၊ အလိုအလျောက်ခုံသုံးစက် ၆ Hydraulic Chuck Power HTC4235
အမည်: Cnc ခုံသုံးမော်ဒယ်လ်ပုံစံ - HTC4235 Chuck Power: ၆ ခု၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ချက်အမြင့်အလျား - ၃၃၀ မီလီမီတာတွင်းအပေါက်မှတဆင့်အချင်း - ၅၆ မီလီမီတာ Z Aixs ကအကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၃၅၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ၅.၅kwkw ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - 4500rpm X Axis Limited ခရီးသွားလာခြင်း - ၄၇၀ Slant Bed ရိုးတံသတ္တုဖြတ်တောက်မှုများအတွက် CNC ခုံစက် 1 ။ ကြမ်းခင်းကြမ်းခင်းမှု၊ တင်းကျပ်မှုမြင့်မားမှု၊ မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု၊ ချောချောမွေ့မွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတို့သည်ရေရှည်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအာမခံသည်။ တုန်ခါမှုနည်းခြင်း၊ ကိရိယာများ၏ရှည်လျားသောသက်တမ်း၊ tools.3 ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေသည်။ configu ရွေးချယ်မှုများပို ...
အလျားလိုက်အလျားသုံးရိုးအလွှာအကျီအိပ် CNC ခုံစက် 360mm Max Table သည်စားပွဲကျော်
အမည် - စက်လည်ပတ်စက် Cnc မော်ဒယ်လ် - HTC3630 စားပွဲကျော်အမြင့်လွှဲအချင်း - ၃၆၀ မီလီမီတာအမြင့်အရှည် - အပေါက်တစ်ပေါက်မှတစ်လုံး ၂၃၃ မီလီမီတာ - အပေါက် ၅၆ မီလီမီတာဇအမ်အမ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၃၀၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ၅.၅kwkw ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၆၀၀၀rpm အလျားလိုက်အမျိုးအစား ၃ ဝင်ရိုး Axis Max Swing Diameter ၃၆၀mm မီလီမီတာစီဒီလှည့်စက်နှင့် Y ၀ င်ရိုးထွက်ကုန်ထုတ်ကုန်လျော့နည်းခြင်းစက်သည်စက်ဖြစ်ပြီးသေးငယ်။ အလယ်အလတ်တန်းရှိအပြားအမျိုးမျိုးနှင့်လုပ်ငန်းခွင်အပိုင်းအစအမျိုးမျိုးကိုလည်ပတ်ရန်သင့်လျော်သည်။
Hole မှတဆင့် 66mm Spindle ပါ ၀ င်သည့် Axis Linear Way အကျီင်္သုံးစက် CNC ခုံစက်
အမည်: Cnc ခုတ်စက်ပုံစံ: HTC5661 စားပွဲကျော်အမြင့်လွှဲအချင်း: ၅၆၀ မီလီမီတာအကျယ်အ ၀ န်း - ၅၀၀ မီလီမီတာ Z အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၆၁၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၄၂၀၀rpm အမြန်နှုန်းကုတင် ၅၆၀ မီလီမီတာ slant အမျိုးအစား Cnc ခုံစက်လည်ပတ်မှု - တွင်းပေါက်မှ ၆၆ မီလီမီတာကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင်။ အနိမ့်အိပ်ယာအမျိုးအစားသတ္တုများပုံသွန်း, နှစ်ခုဝင်ရိုး linear လမ်း, မြင့်မားသောတိကျမှုအပြောင်းအလဲနဲ့လျှောက်ထား♦ထိုင်ဝမ် linear လမ်း, တိကျမှန်ကန်မှုကို၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာ♦ထိုင်ဝမ်မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုဗိုင်းလိပ်တံ, ဂျပန်မြင့်တိကျသောဝက်ဝံ ...
စက်မှုအလိုအလျှောက် CNC ခုံကြိတ်စက် 1500 * 1100 * 1700mm အရွယ်အစား
အမည် - စက်လည်ပတ်စက် Cnc မော်ဒယ်လ် - HTC35 မက်စ်အမြင့်လွှဲအချင်း - ၃၆၀ မီလီမီတာအမြင့်ဆုံးအပုဒ် - အ ၀ ိုင်းမှအချင်းဖောက်စက် - ၅၆ မီလီမီတာအမ်ဇစ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၂၇၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ: ၅.၅kwkw ဗိုင်းလိပ်တံလှည့်နှုန်း - ၆၀၀၀rpm အလျားလိုက်အမျိုးအစား ၃ ဝင်ရိုး Axis Max Swing Diameter 360mm Cnc Turning Lathe Machine 6000Rpm Prouduct feature X / Z သည်ပုံမှန်လမ်းဖြစ်သည်။ လျင်မြန်သောအစာသည် ၂၀ မီတာ / မိနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုင်ဝမ်မြန်နှုန်းမြင့်ဗိုင်းလိပ်တံ၊ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အမြန်နှုန်း Coulping၊ bearing၊ ball screw နှင့် linear way တို့သည်တိကျသေချာစေရန် ...